ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူစက်ကိရိယာများ၊ သေတ္တာစက်ကိရိယာ - HUATAO
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်ကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသောတရုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ Professional ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်တာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ် "HUATAO" ကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်မြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီး၊ HUATAO သည်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖော်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုကြောင့်စီးပွားရေးသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဟွာတာ Lover လီမိတက်သည် amoeba စနစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနနှင့်အရောင်းဌာနသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်သီးခြားဖြစ်ပြီးအရောင်းဌာနကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သီးခြားစာရင်းကိုင်စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်သည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစက္ကူ Hydropulper အပိုပစ္စည်း Rotor
Pulping အတွက် SUS တုန်ခါမှုဖန်သားပြင်
ပျော့ဖတ်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာ Separator Recycl ...
Single Effect Turbo Separator ပျော့ဖတ်စစ်ဆေးမှု ...
စက္ကူပျော့ဖတ်များအတွက် Consistency အနိမ့် Centri Cleaner ...
ပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Gravity Cylinder Thickener ...
: D Hydrapulper
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတွက် Roll ကိုနှိပ်ပါ
စက္ကူ Ma များအတွက်သံမဏိစုတ်ယူနိုင်သော Couch Roll ...
Flu Suction Box Dewatering Element
မြင့်မားသော Vacuum Box Dewatering Element
ဖြတ်တောက်ခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် slotting စက် Die
Bhs Fosb အဘို့အ Tungesten Carbide Corrugating Roll ...
Corrugator Gluer စက်
Corrugator Preheater စက်
တစ်ခုတည်း Facer စက်ရေနွေးငွေ့အပူ
Corrugator Machine အတွက် Auto Splicer ...
အလိုအလျောက် ... ဟိုက်ဒရောလစ် Shaftless စက်ကြိတ်
Kevlar Edge နှင့်အတူ 100% ဒြပ် Corrugator ခါးပတ်
လက်စွဲစာအုပ်ပြား Die ဖြတ်စက်
PU Anvil အဖုံးသည် Corrugated Rotary Die Cu တွင်အသုံးပြုသည်။
Semi-Auto မြန်နှုန်းမြင့် Flexo ပုံနှိပ်ခြင်း။
စက္ကူစက်အတွက် Spiral Dryer မျက်နှာပြင်
Polyester Flat Dryer မျက်နှာပြင်ကိုစက္ကူစက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
Polyester Linear မျက်နှာပြင်စစ်ထုတ်စက်
စက္ကူစက်အတွက် Polyester လိမ်ခါးပတ်
စက္ကူစက်ရုံမှ Hydrolysis ဒဏ်ခံခြောက်သွေ့သောထည်များ
သံမဏိထောင့်ဖြတ် Cylinder အဖုံးများ ...
100% Viscose ပစ္စည်းအပ်အပ်
100% Nomex အဆုံးမဲ့ 10mm အထူ Sanforizing ခံစားမှု
Variou အတွက်အဆုံးမဲ့ချောမွေ့သော Nomex Transfer Felt ...
Fibe နှင့်အတူ Airgel Fiberglass ကိုကာကွယ်ခြင်းစောင် ...
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လူမီနီယံသတ္တုပါး Aerogels စက်မှု Ins ...
Airgel စောင် Felts
PARA-Aramid 1414 မီးခံသေတ္တာများအတွက် ၁၀၀% ကီဗရာ ...
လွှဲပြောင်းပုံနှိပ် ngarasa ခါးပတ်
Ilmenite Ore Wet မြင့်မားသောသံလိုက် Separa ...
စောင်းဖန်သားပြင်လေးလံသော Duty Screen Panel Self Cleani ...
30mm မှ 60mm PU ဖန်သားပြင် Fine Sand အတွက် ...
Polyurethane Coated သံမဏိမျက်နှာပြင်
သတ္တုတွင်းတူးဖော်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက် Poly Screen မီဒီယာ ...
၀.၀၇၅mm - ၁.၅ မီလီမီတာ Aperture မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း F ...
ကျောက်မီးသွေးတုန်ခါမှုအတွက် Polyurethane မျက်နှာပြင်ကွက် ...
၁.၅ မီလီမီတာ Lide နှစ်ဖက်လုံးဖွဲ့စည်းထားသည့် HDPE Geomembrane ...
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Polyester မဟုတ်သောဆေးထိုးအပ်ထိုးထားသော Geotexti ...
ဆိုဒီယမ် Bentonite Geosynthetic ရွှံ့စေး Liner နှင့်အတူ ...
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Polyester အဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးမဟုတ် ...
ပလပ်စတစ် Polypropylene PP Biaxial Bx Geogrids 20 ...
ရေနုတ်မြောင်းများအတွက် Tr-Dimension Composite Geonet
PP ရက်ကန်းထည် / PP ယက် Geotextile အထည်အလိပ် 70 ...
Corrugated Paperboar အတွက် Circular Siltter Knife ...
၁၀၀% သန့်စင်သောသိုးမွှေးပျော့ပျောင်းသောစက်မှုအ ၀ တ်အထည် ...
Kraft Liner စက္ကူစက် 2800/500 Double Wire ...
Semi Automatic Carton Box ချုပ်စက်
လက်စွဲ Flat ပြား Cutter စက်
Corrugated Box Ca အတွက်ပုံနှိပ်စက်ကို ...
ကြိတ်ခွဲထားသောကတ်ထူ ... ကားပေါ်တွင်ကြိတ်ခွဲစက်
မြန်နှုန်းမြင့် Corrugating Mac အတွက် Corrugator Belts များ ...
မြှောင်းပုံကတ်ထူပြား Tungesten Carbide ဖြတ် ...
အချက် (၆) ချက်သည်နိမ့်သောအာရုံစူးစိုက်မှုသန့်စင်ခြင်းအသုံးပြုခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်
ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါအချက် (၆) ချက်သည်နိမ့်သောအာရုံစူးစိုက်မှုသန့်စင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ ၁။ တပ်ဆင်ခြင်းအမြင့် - တပ်ဆင်ခြင်းအမြင့်သည်သဲဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စနစ်တည်ငြိမ်မှုအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ slag remover system ကို t ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အနေအထားမှာတည်ဆောက်သင့်ပါတယ် ...
paper စက္ကူစက်ထုတ်လုပ်မှု A ၏နည်းပညာအခြေအနေ၊ လိုင်းဖိအားနှင့်စက်မှု ၀ န်ဆောင်မှု B၊ လေဟာနယ် C အရွယ်အစား၊ အဝတ်လျှော်အခြေအနေ D၊ slurry အခြေအနေ E၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနည်းလမ်း①အရပုံမှန်ရွေးချယ်ရန်စောင်များအသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ စက္ကူစက်၏လည်ပတ်မှု ...
HUATAO တွင်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်
HUATAO GROUP သည်ပစ္စည်းဝါယာကြိုးအသစ်ကိုတီထွင်ရန်အထူးပြုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Tufflex သည်ပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော polyurethane ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယက်ဝါယာကြိုးဖန်သားပြင်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ကွက်လပ်ကိုဖြတ်ပြီးချိတ်ထားသောကုန်းပတ် (ဘေး - နှင့်အဆုံး - တင်းတင်းကြပ်) ဖြင့်စိစစ်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ Th ...
Self-Cleaning မျက်နှာပြင်ကွက်, Derrick မျက်နှာပြင်ကွက်, Airgel စောင်, Polyweb Urethane မျက်နှာပြင်ကွက်, မျက်နှာပြင်ကွက်, မြှောင်းပုံခါးပတ်,